The Ab Presents Nepal » भारतले खोल्न नमानेको बाँध बाढीले भत्काईदियो, दिल्लीमा खैलाबैला !
भारतले खोल्न नमानेको बाँध बाढीले भत्काएको छ । बैरगनिया, अशोगी, भकुरहर र सिन्धुलिया बाँध पानीको सतह बढेपछि आफै भत्किएको हो ।जिल्लाको अधिकाँश ठाउँ जलमग्न भएपछि जिल्ला प्रशासनले बाँध खोल्न गरेको थियो । तर भारतले बाँध खोल्न अस्वीकार गरेका थिए । भारतले बाँध खोल्न नमानेपछि जिल्लाबासी चिन्तित भएका थिए । बाँध फुटेर पानी भारततर्फ बगेपछि रौतहटमा पानीको सतह घट्न थालेको छ ।
यो पनि – :
भारतका कारण रौतहट डुब्यो, शुरू भयो भारतको दादागिरिको विरोध
भारतले बनाएको बाँध र बाँध जस्तो राजमार्गका कारण रौतहट जिल्लासहित अधिकांश तराईका जिल्लाहरूमा डुबान भएको छ ।
डुबान भएपछि स्थानीयले भारतको विरोध गरेका छन् । भारतले सिमानामा बनाएको बाँधकै कारण रौतहट जिल्लाको सदरमुकाम गौर डुबानमा परेको छ ।अविरल वर्षाका कारण नदीहरूमा पानीको सतह बढेको छ । पानीको सतह बढेपछि तराईबाट पानी बगेर जान नपाउँदा डुबान भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
भारतीय बाँधमा भएका पानी थुन्ने ढोकाहरू भारतीय पक्षले नखोलिँदा रौतहट सदरमुकाम गौरका बस्ती संकटमा परेका छन् ।
पानी थुनेर छिमेकी मार्न खोजेको भन्दै सामाजिक सन्जालमा भारतको बिरोध भैरहेको छ । फेसबुक प्रयोगकर्ताले भारत विरोधी स्टाटससँगै गो ब्याक इन्डिया ह्यासट्याग पनि प्रयोग गरेका छन् ।भारतले दशगजा क्षेत्रमा बनाएको बाँधले नेपालको भू–भाग डुब्दै आएको छ । भारतको बाँधका कारण गौरमा दश फुटभन्दा बढी पानी जमेको छ ।
गौरमा डुबान हुँदा पनि भारतीय पक्षले बाँधको ढोकाहरू खोल्न मानेको छैन । भारतीय पक्षले अटेर गरेपछि भारतविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा विरोध शुरू भएको हो ।रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले भारतीय पक्षसँग बाँध खोल्न आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेको जानकारी दिएका छन् ।
लक्ष्मीपुर बेलबिछ्वा भन्ने ठाउँको बाँध पानीले पार गर्न करीब अढाइ फुट मात्र बाँकी छ । त्यो बाँध फुट्यो भने भारतीय बजारहरू बैरगनिया, अशोगी, भकुरहर, सिन्धुलिया लगायतका दर्जनौं बस्ती बगाउनेछ ।भारतले बाँध क्षेत्रमा उल्लेख्य संख्यामा सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) परिचालन गरेको छ । भारतकै कारण नेपालको सीमा क्षेत्रमा डुबान हुँदै आएको छ ।
यो पनि -:
बाढीबाट कसरी बच्ने बाढी पहिरोबाट कसरी बच्ने ?
पहाडमा पहिरोले धेरैको ज्यान गएको छ । कति बेपत्ता भए भन्ने यकिन छैन । पानी पर्ने क्रम नरोकिएकाले अझै बाढी पहिरोको खतरा छ ।बाढी पहिरोको बेला के कुरामा ध्यान दिने त ?बाढीबाट जोगिन नदी तटीय क्षेत्रमा बस्न हुन्न ।होचो भूभागमा आवातजावत गर्न हुन्न ।
गाउँ र वस्तीमा बाढी आयो भने उचो भूभागमा जानुपर्छ समूहमा बस्नुपर्छ ।
बाढी पूर्वानुमान शाखाको पैसा नलाग्ने नम्बर ११५५ मा फोन गरेर कता बाढी जाँदैछ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ ।जल तथा मौसम पुर्वानुमान विभागले २४ सै घण्टा मौसमी गतिविधि अपडेट गरिरहेको छ । संम्भव भएसम्म त्यो सूचना नियमित लिनुपर्छ ।
ठूलो पानी परेपछि जमिन कमजोर हुने भएकाले भिरालो जमिनमा बस्दा उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्छ ।पहिले पहिरो गएका ठाउँमा फेरि पनि पहिरो जाने संभावना धेरै हुने भएकाले त्यस्ता ठाउँको पहिचान गर्नुपर्छ ।आवातजावत कम गर्नुपर्छ ।
घर भत्किएर जनधनको क्षती हुने भएकाले घर बाहिर निस्किएर बस्नुपर्छ ।ठूलो पानी परिरहे जाग्राम बस्नुपर्छ ।यति गर्नाले केही हदसम्म भएपनि ज्यान जोगाउन सकिन्छ । विपतको बेलामा समूहमा बस्दा एकअर्कालाई सहयोग गर्न सजिलो हुन्छ । यस्तै सम्भव भएसम्म सञ्चार माध्यम र सूचना प्रवाह गर्ने निकायसँग नियमित सम्पर्कमा बसौं । यसले उद्धार तथा राहत वितरणमा सहज हुन्छ ।